आइतबार, जेठ २, २०७८ ०६:१०:५५ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
काठमाडौं–२०७४ फागुन १४ गते डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिनदेखि शेयर बजारले राम्रो प्रतिकृया दिएको थिएन । उनी गभर्नर हुँदादेखि नै शेयर बजारप्रति सकारात्मक थिएनन् । अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरको आखाबाट हेर्ने क्रममा लगानीकर्ताले उनलाई रुचाएनन् ।
अर्थमन्त्री भएको केही दिनमा उनले बिबिसी नेपाली सेवालाई एउटा अन्तर्वार्ता दिए । जसमा भनेका थिए–‘बैंकिङ क्षेत्रको लगानी शेयरलगायतका अनुत्पादनमुलक क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।’ उनको भनाइलाई लिएर शेयर बजारका लगानीकर्ताले उनलाई बजारविरोधी अर्थमन्त्रीको रुपमा चित्रण गरे । उनी अर्थमन्त्री हुनुअगाडि नेप्से सूचक १३७४ अंकमा थियो ।
त्यतिबेला शेयर बजार घट्दो क्रममा थियो । १८८१ अंकबाट लगातार ओरालो झर्ने क्रममा रहेको बजार खतिवडाको छायाँले केही हदसम्म तल झर्‍यो ।
खतिवडा अर्थमन्त्री भएको दिन शेयर बजार १५ अंकले तल झरेको थियो । जव खतिवडाले बिबिसी नेपाली सेवाको अन्तर्वार्तामा शेयर बजारलाई अनुत्पादनमुलक क्षेत्र भने त्यसपछि एक दिन ४१ अंकले घटेको थियो । खतिवडा अर्थमन्त्री भएको दुई महिनाभित्र शेयर बजार १८२ अंकले घट्यो ।
बजार घटेको भन्दै लगानीकर्ताले उनको चर्को विरोध गरे । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अगाडि उनको राजीनामा माग गर्दै शेयर लगानीकर्ता अनशनसम्म बसे । केही नेता प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका ठूला नेताका सम्म पुगे ।
अनशन बसेका लगानीकर्ताको माग संवोधन गर्ने क्रममा खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा बजार तथा पुँजी बजारको अध्ययन गर्न समिति बनाए । उक्त समितिको अध्ययनपछि केही सुधारका काम पनि भए ।
ब्रोकरहरुको भ्याटको विषय सधैंका लागि समाधान गरियो । सुरुमा पुँजीगत लाभकर बढाएका खतिवडाले पछि पुरानै अवस्थामा झारे । पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रुपमा मान्यता दिइयो ।
शेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै बैंकको व्याजदरले प्रभावित पार्छ । व्याजदर घटाउन खतिवडाले राष्ट्र बैंकमार्फत् धेरै पहल गरे ।
पुँजी बजारका विषयमा सधै नकारात्मक भाषण गर्ने खतिवडा सबैको चर्को विरोधपछि सुधारिएको भाषण गर्न बाध्य भएका थिए । सुरुवाती अवस्थामा ‘मैले केही राम्रो भाषण गरिदिएर बजार सुधार होस् भन्ने अपेक्षामा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो नसोच्दा हुन्छ’ भन्ने खतिवडाले पछिल्ला दिनमा ‘शेयर किन्नुहोस् अहिले किन्दा धेरै फाइदा हुन्छ’ समेत भन्न भ्याए ।
राष्ट्रिय सभामा खतिवडाको दुई वर्ष कार्यकाल सकिने र उनी अर्थमन्त्री नरहने हल्लाले ६ महिनाअगाडि नै शेयर बजारमा उछाल आएको थियो । कहिले मन्त्रीहरु परिवर्तन हुने र त्यसमा खतिवडा पर्ने भन्ने हल्लाले बजार सुधार भयो भने कहिले अब खतिवडालाई वैधानिक रुपमा नै हटाउनु पर्ने भन्दै हल्ला फैलाइयो ।
विगत दुई सातामा मात्रै‌ शेयर बजार ११४ अंकले सुधार भएको छ । विगत तीन महिनाको अवधिमा ३३२ अंकले सुधार भइसकेको छ ।
खतिवडाले राजीनामा दिएसँगै बजार सुधार हुने आँकलन गरिएको छ । उनको बहिर्गमन अगाडि नै शेयर बजार ३३२ अंकले सुधार भएकाले तत्काल धेरै अंकले माथि भने नजान सक्छ ।
किन रुचाइएन खतिवडालाई ?
खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय अनुसन्धान विभागमा बसेर काम गरे । त्यसपछि गभर्नर भए । गभर्नरपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए । उनी नेताभन्दा बढी कर्मचारी, अझ प्रशासक बने । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा रहेर काम गर्दा सबैको गलत पक्षलाई मात्रै देखेका खतिवडाले सैद्धान्तिक रुपमा आफूलाई दरिलो बनाए । तर उनी नेता बन्न सकेनन् । आश्वासन बाँड्न सकेनन् । सुधारका कुरा गरे, अझ नियन्त्रणमुखी कुरा गरे । यसले गर्दा लगानीकर्ता व्यवसायी हच्किए ।
व्यवसायीले जे वोल्यो त्यही अनुसार काम हुँदै आएकोमा केही बुझेका खतिवडाले उनीहरुका कुरा सुन्न चाहेनन् । अझ व्यापारीको प्रभावमा पर्नुभन्दा भेटै नगर्ने पक्षमा उभिए । यसले उनको काम नेताको भन्दा बढी कर्मचारीको जस्तो भयो । यहीबाट उनीप्रति असन्तुष्टिका स्वर उठ्न थाले ।
यही क्रम शेयर बजारमा पनि देखियो । शेयर बजारका लगानीकर्ता उनीसँग भेटेर बजारका विषयमा केही भए पनि सकारात्मक कुरा गरिदिनुस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्थे । शेयर बजार लगानीकर्ताको मनोविज्ञानका आधारमा तल–माथि हुन्छ । उनीहरुको आत्मविश्वास बढ्यो भने बजार सुधार हुन्छ । यसका लागि सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास हुनुपर्छ ।
लगानीकर्ता र व्यवसायीसँग छलफल गर्न नचाहने खतिवडाको शैली नै उनको अलोकप्रियताको कारक बन्यो । पहिलो बजेटमै शेयर बजारको पुँजीगत लाभकर बढाए । सबै क्षेत्रमा करमात्रै वृद्धि गरे । यस अवधिमा धेरै सुधारका काम पनि भए तर सम्बन्धित पक्षको साथ लिएर काम गर्न सकेनन् ।
पछिल्लो समयमा शेयर बजारमा पनि उनले धेरै सुधारका प्रयत्न गरे । तर पनि उनको बहिर्गमनको समाचारमा रमाउने लगानीकर्ता आइतबारको बजारमा कत्तिको रमाउने छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । नेपाल लाइभडटकमबाट
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २०, २०७७, ०९:४६:००